မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်မှု စိုးရိမ်ရေမှတ် (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာခွင့်ပြုရေးအတွက် OIC မှ မြန်မာနိုင်ငံအား တိုက်တွန်း
Mandalay Regional Chief Minister U Yeဲ Myint harshly tells Local Muslim Community Leaders at the meeting »
မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်မှု စိုးရိမ်ရေမှတ် (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး)
မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်မှု စိုးရိမ်ရေမှတ် (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ M-Media
ဘာသာပြန်- သာကီ ထပ်ကောင်း
ယမန်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲ၌သာ ပိတ်လှောင်လျက်ရှိခဲ့သည့် မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုကြီးသည် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းသို့ ပေါက်ကွဲပွင့်အံလာခဲ့ပေပြီ။ ၉၆၉ စစ်သွေးကြွ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကားတို့သည် မိတ္ထီလာ၊ နေပြည်တော်၊ ပဲခူး နှင့် (များမကြာမီက) ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ မွတ်စ်လင်မ်များအပေါ် ရန်စတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး နှင့် အခြားမြို့ကြီးများမှ မွတ်စ်လင်မ်တို့မှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ဝတ်တက်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်အချင်းချင်း ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်း၊ မိမိတို့နေအိမ်ပြင်ပနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား မှုနေရာများတွင် မိမိ ယုံကြည်ရာအယူဝါဒကိုပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ခြင်း ကဏ္ဍများ၌ စိုးတထိတ်ထိတ် ဖြစ်လာကြသည်။ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မွတ်စ်လင်မ်လူဦးရေ အနည်းဆုံး တစ်သိန်းမှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး၊ ရာနှင့်ချီ၍ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
ယင်းသို့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း လများစွာကပင် မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်တို့မှ သိရှိထားကြပြီးဖြစ်သည်။ အစိုးရပိုင်းမှ ၂၀၁၂ ရခိုင်အရေး သည် ဒေသတွင်းပြဿနာ တစ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ နိုင်ငံခြားသံတမန်များကို အယုံသွင်းခဲ့ကြသော်လည်း ၊ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်ကမူ ယမန်နှစ်ကပင် နိုင်ငံ့အခြားဒေသများရှိ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ၀တ်ကျောင်းများ၊ ဈေးဆိုင်များကို ရန်စတိုက်ခိုက်ခြင်း စတင်နေခဲ့သည်။ အကြီးမားဆုံး ဈေးကွက်တံခါးတစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပွင့်လှပ်လာနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကြောင့် အလှူရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အမြောက်အများက ထိုစကားကို ယုံစားမိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ လူမျိုးများ နှင့် ဗမာ မဟုတ်သောလူမျိုးစုများအား မုန်းတီးဆန့်ကျင်သည့်ဓလေ့ရှိသော်လည်း၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာမှစပြီး မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးအစွဲ ကြီးမားပြင်းထန်လာစေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်တွင် လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားနှိပ်ကွပ်မှု အကြမ်းတမ်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် နိုင်ငံတွင်း အင်အားအကြီးမားဆုံးလူများစု ဖြစ်နေကြသည်။ ၉၆၉ မည်သောအုပ်စုသည် မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးတရားများ ဟောပြောခြင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်တို့အပေါ် ပြက်ရယ်ပြုစော်ကားခြင်း၊ တစ်ဖက်သတ် အာဃာတ သွတ်သွင်းထားသော ဗီစီဒီများ ဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့ကို တစ်နှစ်ကျော်တိုင်တိုင် ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၅ % မျှပင် အသုံးမပြုသော မြန်မာအင်တာနက်ပေါ်၌ မွတ်စ်လင်မ်များကို မုန်းတီးနာကြည်းအောင် အလွန်အကျွံချဲ့ကားရေးသားမှုများ ဖုံးလွှမ်းပျံ့နှံ့စေခဲ့သဖြင့် – အခြားလူမျိုး လူနည်းစုမုန်းတီးရေးတရားများထက် ဆိုးဝါးသွားခဲ့သည်။ ဒေါ်စုကြည်၏ အတိုက်အခံ NLD ပါတီအတွင်း၌ပင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၅ % မျှသာရှိနေသည့် မွတ်စ်လင်မ်လူနည်းစုတို့အပေါ် မုန်းတီးမှုအစွဲများ ၀င်ရောက်လာသည်မှာ စိုးရိမ်စဖွယ် ဖြစ်လာပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဖိနှိပ်အချုပ်ခြယ်ဆုံးတိုင်းပြည်များအနက် အပါအ၀င်ဖြစ်နေရာမှ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်အဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤသို့ လူနည်းစုအပေါ် အမုန်းပွားတိုက်ခိုက်ခြင်းက ၂၁ ရာစု စစ်အေးကာလ နောက်ပိုင်း ယူဂိုစလားဗီးယားမြင်ကွင်းနှင့် တူညီနေပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုအလျဉ်းမဖြစ်ပွားစေခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးကဏ္ဍ၌ အတော်အတန် ခရီးပေါက်သွားခဲ့သည့်တိုင် ယခုအခါ ပရမ်းပတာအဖြစ်သို့ သက်ဆင်းရပေတော့မည်။
အတိတ်မှ အရိပ်ဆိုးများ မပယ်နိုင်သေး
ခွဲခြားဆက်ဆံအုပ်ချုပ်မှုကို အသုံးပြု၍ ဗြိတိသျှကိုလိုနီတို့မှ သွတ်သွင်းထိုးဆွပေးခဲ့သည့် အပြင်၊ စစ်တပ်မှ နှစ်ပေါင်း ၅၀ မျှ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျုိုးခြားများအပေါ် ကြောက်ရွံ့သောရောဂါ နှင့် လူမျိုးစုများအကြား အပြန်အလှန် တင်းမာမှု တို့သည် သမိုင်းတွင်လောက်အောင် ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ အာဏာချုပ်ကိုင်မှု စွန့်လွှတ်သည်ဟုဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြီး ပြည်သူများပါဝင်သည့် လွှတ်တော်စံနစ် ကျင့်သုံးပြဌာန်းသည်။ သို့စေကာမူ နိုင်ငံတော်၏ အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် စစ်တပ်က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေဆဲပင်။ လက်တွေ့ကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြုလုပ်နေသူ အရပ်သားသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည်လည်း သမ္မတ မဖြစ်မီက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏တံခါးဖွင့်ဝါဒက အတိုက်အခံပါတီများ၊ မီဒီယာများကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အချို့သာ မြန်မာမီဒီယာအနေနှင့် တည်ရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်မှစတင်ကာ အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်မှု လျှော့ချလိုက်သဖြင့် မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ ရာနှင့်ချီ၍ ပေါ်ထွက်လာသည်။ တစ်ခါ ယခုလ အတွင်း မီဒီယာဥပဒေအား ဖြေလျော့ပေးခဲ့ရာ မြန်မာဘာသာနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းဂျာနယ် ၄ စောင်ထွက်ရှိလာပြန်သည်။ ယခင်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိပြီး၊ မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရသော NLD သည် လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြီး၏နောက် အာဏာပိုင်အစိုးရနေရာရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြသည်။
သို့သော် ရုတ်တရက် တံခါးဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း၌ အစွဲမကျွတ်သောအင်အားစုများ၏ အန္တရာယ် ကလည်း ကပ်ပါလာတော့သည်။ စစ်တပ်သည် ပြည်သူ့လက်အောက်သို့ လုံးလုံးလျားလျား မရောက်ရှိသေးသည်သာမက အကြမ်းဖက်မှုနောက်ကွယ်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်နေသည်ဟု မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်အချို့မှ ယူဆထား၏။ သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ စစ်ဦးစီးများသည် မိမိအမိန့်အား နာခံမည် မနာခံမည်ကို ဦးသိန်းစိန်မှ တပ်အပ်မဆိုနိုင်သေး။ အကယ်၍ မတည်ငြိမ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရန် တပ်မတော်အား အာဏာအပြည့်အ၀အပ်နှင်းလိုက်လျှင် ၄င်းတို့မှ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ပြုမူခဲ့သော် အခြေအနေပို၍ဆိုးဝါးသွားမည်ကိုလည်း သူက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည်လည်း အင်အားမလုံလောက် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ကာကွယ်တုန့်ပြန်ရေး အတွက် နည်းစံနစ်ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းလွန်းနေသည်။
အစိုးရအပေါ် အယုံအကြည်နည်းပါးသော လူနည်းစုအုပ်စုဝင် များပြားစွာရှိနေသည့် တိုင်းပြည်တစ်ခု၌ ဖြစ်မြောက်ထိရောက်သော စီမံကိန်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှ၏။ သို့တိုင် နိုင်ငံရေးအနေအထားပွင့်လင်းလာပါသော်လည်း အာဏာပိုင် အစိုးရသော်လည်းကောင်း ဒေါ်စုကြည်သော်လည်းကောင်း ၄င်းကို စီမံထားခြင်း မရှိကြချေ။ ဗဟိုအစိုးရအပေါ် လူနည်းစုအုပ်စုဝင်များမှ အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေသည့်အဖြစ်ကို မဆိုထားနှင့်၊ ဒေါ်စုကြည်၏ NLD ပါတီတွင်းမှ ထိပ်တန်းအဆင့်ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုအကြား၌ပင် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မတွေ့ရချေ။
ဒေါ်စုကြည်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် လူသိရှင်ကြား တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ်မှ သူမဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမြင်ကိုလည်း လက်ကိုင်ထားသည်။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ယင်းသို့ ကွပ်ကဲစီမံနိုင်မည့် တစ်ဦးတည်းသော ဗမာလူမျိုးဟုလည်း လူနည်းစုခေါင်းဆောင်များက သူမအပေါ် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယမန်နှစ် လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်ရောက်သွားပြီးကတည်းက ဒေါ်စုကြည်သည် မိမိ၏နိုင်ငံရေးအူတိုင်ကို အကောင်အထည် မဖော်သေးချေ။
ရှေ့ဆက်ရပါသော် လူနည်းစုစာရင်းဝင် လူမျိုးစု နှင့် ဘာသာကွဲသူတို့၏ နေရပ်ဒေသများဝယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံလိုအပ်ချက်များအပေါ် အကူအညီများ၊ မြှုပ်နှံဆောင်ရွက်မှုများ အထူး လိုအပ်နေချိန်တွင် – နေပြည်တော်မှအရာရှိများသည် လမ်း၊ လျှပ်စစ် နှင့် အခြားအခြေခံအရာများ ထွေထွေထူးထူး မချို့တဲ့လှသော ဗမာလူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြသည့် နေရာဒေသများအတွက် နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်လာစေရန် အပြိုင်အဆိုင် လမ်းကြောင်းနေကြပေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းပေါ်ထွန်းလာကတည်းက အလုအယက်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ၀င်ရောက်လာကြသည့် လှူဒါန်းထောက်ပံ့သူများအနက် လူမျိုးစုဆိုင်ရာတင်းမာမှုများအပေါ် အလေးထားသူများမှာ မဆိုစလောက်သာရှိကြသည်။ အများစုမှာကား ယင်းကိစ္စ၌ ပူးပေါင်း ပါဝင်ထောက်ပံ့မှု မရှိတတ်ကြချေ။
ခေါင်းဆောင်များသည် သီးခြားရပ်တည်မှုကိစ္စအား ရှောင်ဖယ်နေကြခြင်း၊ ဗမာလူမျိုး မဟုတ်သူများကို သေးသိမ်စေခြင်းတို့က အစွန်းရောက်အသံများအား ကျယ်လောင်သွားစေ ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက် နှင့် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းဂျာနယ်များတွင်လည်း ခေတ်သစ်နည်းဖြင့် အမုန်းတရားသွတ်သွင်းမှု၊ ကြမ်းတမ်းစော်ကားမှုတို့က နေရာအနှံ့ မင်းမူထားကြသည်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်များအတိုင်း မျက်ကန်းမျိုးချစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာလူမျိုးများကသာ မီဒီယာကဏ္ဍတွင် နေရာပေးခြင်း ခံရသည်။
လတ်တစ်လော မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုသည် သိသာထင်ရှားစွာ အကွက်ကျကျ လျှပ်တစ်ပြက်ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်ကို ထောက်ရှု၍ ယင်းမျက်ကန်းမျိုးချစ်များမှာ စံနစ်တကျစီမံမှုအားဖြင့် ပေါ်ထွက်လာကြကြောင်း သိနိုင်သည်။ ဧရာဝတီ နှင့် အခြား ထင်ရှားသော မီဒီယာများအရ ဒေသခံမွတ်စ်လင်မ်များ၊ လူနည်းစုဝင်များက မိမိတို့သည် စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထံမှ မည်သည့်အကာအကွယ် မရရှိကြောင်း ဆိုထားလေသည်။
အပျက်ပျက်နှင့် နှာခေါင်းသွေး မယိုစေလိုလျှင်
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဒေါ်စုကြည် ၊ ယခင် ၂ နှစ်လောက်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိလာခဲ့သော ပြည်ပအလှူရှင်တို့အနေနှင့် ဤအဖြစ်ဆိုးအား ရပ်တန့်အောင် ဆောင်ရွက်မှ ရပေတော့မည်။ အစိုးရသည်လည်းကောင်း၊ အတိုက်အခံများသည်လည်းကောင်း၊ ထင်ရှားသော လူမျိုးရေးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ သည်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာသီးခြားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်ရေး အစီအမံကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၌ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံ စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းလိုက်ရာ လူမျိုးရေးတင်းမာမှုများ လျော့နည်းသွားသည်သာမက အရည်အသွေးမှီနိုင်ငံရေးသမား များစွာပေါ်ထွန်းလာသဖြင့် ယခင်ပုံဟန်နှင့် ကွဲပြားသောနိုင်ငံဖြစ်သွားသည် အထိ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖို့ မြန်မာပြည်သူလူထု အခွင့်အရေးအပေါ် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခြင်း၊ လူမျိုးရေးဘာသာရေးအကြောင်းရှာတိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် ဆွံ့အနေခြင်းမျိုးမှ ရှောင်ရှားသင့်နေပြီဖြစ်သည်။
တဖန် ငြိမ်းချမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အပူတပြင်းလိုအပ်လျက်ရှိသော ဒေသများအတွက် မြန်မာအစိုးရသည် အလှူရှင်များ၏အထောက်အပံ့ရယူပြီး လိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးအပ်သည်။ လူထု၏လက်၌ရှိသော ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း၊ ပဋိပက္ခဖြစ်ရာဒေသများတွင် စစ်တပ်၏ပါဝင်စွက်ဖက်မှု လျှော့ချခြင်း၊ သတင်းရင်းမြစ်အား မှန်ကန်စွာရယူနိုင်ဖို့ အရေးပါကြောင်း သိနားလည်ရန်အတွက် လူငယ်ဂျာနယ်လစ်များအား သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုရရှိရန် လွတ်လပ်စွာ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပြုခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တို့မီးရှို့မီး သတင်းဖော်ပြချက်များက တင်းကြပ်သော ပုံနှိပ် ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းမှု ဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်း၊ တလွဲအသုံးချလွတ်လပ်မှုကြောင့် အွန်လိုင်းဂျာနယ်လစ်များသည်လည်း ယင်းအကျိုးဆက်ကို ခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအာဏာပိုင်အချို့မှ ယုံကြည်နေကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ပြည်ပ အလှူရှင်များအနေနှင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်ကတည်းက ဒုက္ခသည်များ ဖောင်းပွလာနေမှု အတွက် ထိရောက်သော အစီအမံများ ချမှတ်ရန် ပိုမိုအရေးကြီးနေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မွတ်စ်လင်မ်အများအပြားသည် ခနော်ခနဲ့လှေငယ်လေးများဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်သို့ အလွတ်ရုန်းပြေးခဲ့ကြရပြီးသည့် တိုင်အောင် ယင်းဒေသ၌ ညှိနှိုင်းစီစဉ်ခြင်းပေါ်လစီ မရှိသေး။ UNHCR နှင့် ယူအေအီး သို့မဟုတ် ဆော်ဒီအာရေဗျ ကဲ့သို့ ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံများသော်လည်းကောင်း၊ ဂျပန် ၊ အီးယူ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများ သော် လည်းကောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ယင်းဒုက္ခသည်တို့အား ယာယီတဲစခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် ရံပုံငွေတစ်လုံးတစ်ခဲ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လင့်ကစား – မလေးရှားကဲ့သို့ တတိယနိုင်ငံများ၌ ၄င်းတို့အနက်အချို့အား အခြေချနေထိုင်နိုင်အောင် အကူအညီပေးကြရမည့်အစား – ထိုမွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ထိုင်းစစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။
ထိုကာလအတောအတွင်း လှေငယ်များဖြင့်ဖြတ်သန်းမှုကို တားဆီးရန် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အတူတကွ စုပေါင်း၍ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှာသင့်ကြပေသည်။ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ ကဲ့သို့ နိုင်ငံများကလည်း မြန်မာပြည်မှထွက်ပြေးလာသူများအား လက်ခံရန် သဘောတူသင့်ပေသည်။ သေချာသည်ကား စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြီးသည် ထိုသူများထံသို့သာ ကျရောက်မည်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်တည်း။
** အရှေ့တောင်အာရှသုတေသီ Joshua Kurlantzick ၏ Myanmar’s Alarming Civil Unrest ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုရေးသားသည် **
ဧပြီ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃
This entry was posted on April 17, 2013 at 9:56 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်သက်မှု စိုးရိမ်ရေမှတ် (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး)”
April 18, 2013 at 2:42 am | Reply
How many such terrible monks in Myanmar? All his posts include almost all spreading defamation,accusations in Myanmar.His FB acc is ” ashin kondanna”.His real location so far is unknown.